Nhau - Yakatemerwa Mvura Yemvura Yakachena: Mhinduro Inonzwisisika
Kugadziriswa Kwemvura Yemvura Yakasarudzika: Solution Solution
Kugadziriswa kwemvura yemvura yakasarudzika ine nzira dzakasiyana siyana dzekuunganidza, kurapwa, nekuparadzira / kushandiswazve kwemvura yakasviba kwenzvimbo dzekugara, maindasitiri kana zvivakwa zvemasangano, masumbu emisha kana mabhizinesi, nenharaunda dzese. Kuongororwa kwenzvimbo-yakasarudzika mamiriro anoitwa kuti utarise mhando yakakodzera yekurapa kwenzvimbo yega yega. Aya masisitimu chikamu chezvivakwa zvechigarire uye anogona kutarisirwa senzvimbo dzekumira-ega kana kubatanidzwa nepakati pekurapa tsvina. Ivo vanopa hwakawanda hwesarudzo dzekurapa kubva nyore, kungoita kurapwa nekupararira kwevhu, inowanzo kunzi septic kana onsite masisitimu, kune nzira dzakaomarara uye dzakagadzirwa senge yepamusoro mishonga yekurapa inounganidza nekurapa marara kubva kuzvivakwa zvakawanda uye kubuda kune chero pamusoro pemvura. kana ivhu. Ivo vanowanzo gadzirirwa pane kana padyo nepapo panogadzirwa mvura yakasviba. Masystem anoburitsa kumusoro (mvura kana nzvimbo dzevhu) zvinoda mvumo yeNational Pollutant Discharge Elimination System (NPDES).
Aya masisitimu anogona:
Shandira pamatanho akasiyana anosanganisira pekugara, emabhizinesi, kana enharaunda diki.
• Tora mvura yakasviba kumatanho ekudzivirira hutano hweveruzhinji uye mhando yemvura;
• Tevedzera nematareji nemitemo yenyika. uye
Shanda zvakanaka mumaruwa, mumadhorobha nemumaguta.
NEI KUDZIDZISWA KWEMAHARA NZVIMBO YENYAYA?
Kugadziriswa kwemvura yemvura yakasarudzika kunogona kuve nzira yakanakira nharaunda inofunga mashandiro matsva kana kugadzirisa, kutsiva, kana kuwedzera masisitimu ekurapa emvura yakasviba. Kune vazhinji nharaunda, kurapwa kwakatemwa kunogona kuve:
• Inodhura uye inodhura
• Kudzivisa mari hombe yemari
• Kuderedza mashandiro uye mari yekuchengetedza
• Kusimudzira mikana yebhizinesi nemabasa
• Green uye inogona kuenderera
• Kubatsira mhando yemvura uye kuwanikwa
• Kushandisa simba nenyika zvine hungwaru
• Kutarisana nekukura uku uchichengetedza girini nzvimbo
• Yakachengeteka mukuchengetedza nharaunda, hutano hweveruzhinji, uye mhando yemvura
• Kuchengetedza hutano hwemunharaunda
• Kuderedza kusvibiswa kunowanzoitika, zvinovaka muviri, uye zvinosvibisa zvinobuda
• Kuderedza kusvibiswa uye njodzi dzehutano dzakabatana nemvura yakasviba
Kugadziriswa kwemvura yemvura yakasarudzika kunogona kuva mhinduro inonzwisisika yenharaunda dzese saizi uye huwandu hwevanhu. Senge chero imwe sisitimu, masisitimu akaisirwa pasi anofanirwa kuve akagadzirwa nenzira kwayo, akachengetedzwa, uye achishandiswa kuti ape zvakanakira mabhenefiti. Iko kwavanotsunga kuve kukwana kwakaringana, masisitimu akaisirwa pasi anobatsira nharaunda kusvika patatu yepazasi yekusimudzira: yakanaka nharaunda, yakanaka kune hupfumi, uye yakanaka kune vanhu.
Loudoun Water, muLoudoun County, Virginia (muWashington, DC, mudhorobha), yatora nzira yakasanganiswa yekushambadzira kwemvura yakasviba iyo inosanganisira kutengwa kwenzvimbo kubva pakati pechirimwa chepakati, nzvimbo yekudzosera mvura sataneti, uye akati wandei madiki masystem enharaunda. Maitiro acho akabvumidza iyo County kuchengetedza hunhu hwayo hwekumaruwa uye yakagadzira sisitimu iyo kukura inobhadhara kukura. Vagadziri vanogadzira uye vanogadzira masango emvura yakasviba kusvika kuLoudoun Water zviyero pamutengo wavo uye nekuendesa humiriri hwesisitimu kuLoudoun Water kuti irambe ichigadziriswa. Chirongwa ichi ndechekuzvimiririra nemari kuburikidza nemitengo inobhadhara mari. Kuti uwane rumwe ruzivo:http://www.loudounwater.org/
Consolidated Utility District (CUD) yeRutherford County, Tennessee, inopa sewer services kune vazhinji vatengi vayo vari kunze kuburikidza nehunyanzvi system. Sisitimu irikushandiswa inowanzo kunzi septic tank effluent pumping (STEP) sisitimu iyo inove neanosvika makumi mashanu epasi pekuganhurwa kwemvura yakasviba masisitimu, ayo ese ane STEP system, inoyerera firita yejecha, uye yakakura yakasviba yekudonhedza system. Ese masisitimu ndeake uye anotarisirwa neRutherford County CUD. Sisitimu iyi inobvumidza kusimudzira kwakanyanya (zvidimbu) munzvimbo dzedunhu uko mapaipi emuguta asingawanikwe kana mhando dzevhu dzisina kukodzera kune yakasarudzika septic tank uye yekudhira mumigwagwa yemumunda. Iyo 1,500-gallon septic tank yakagadzirirwa pombi uye pani yekudzora iri panzvimbo yega yega yekudzora kudzora kwemvura yakasviba kune yepakati mvura yekurasa mvura sisitimu. Kuti uwane rumwe ruzivo: http://www.cudrc.com/Departments/Waste-Water.aspx